Macallin ajnabi ah oo anshax xumo ka wada magaalada Muqdisho & maamulka MCC oo uga raalli ah | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Macallin ajnabi ah oo anshax xumo ka wada magaalada Muqdisho & maamulka...
Macallin ajnabi ah oo anshax xumo ka wada magaalada Muqdisho & maamulka MCC oo uga raalli ah
(Muqdisho) 24 Luulyo 2021 – Macalinka naadiga MCC Mohamed Lamjad Mesteri maalin dhoweyd waxaa arkayay isagoo laga cel celinayay oo feer u duubtay Ciyaartoy koox ka soo horjeeda.
Shalay ne waxa uu inta biyo ku shubay caagii biyaha ku tuuray kadib ku qaad qaaday Ciyaaryahan Kooxdiisa ka tirsan.
Dhowr jeer oo hore waxaan ku arkay dhaqano xun xun, sida isagoo weerar ku qaadaya Garsoorayaasha dhex dhexaadiyo Kulamada Horyaalka.
Marka mid aan idiin sheego anagaa qurbaha joogno oo dadkan la nool dadka ka yimid Wadamada Aljeeriya,Tunisia iyo Marocco iyo Libya waa kuwa ugu liito iguna aqlaaqda xun intii ilaahey abuuray oo waxeyba aaminsanyihiin qofka haduu madow yahay in iyaga ay leeyihiin.
Aniga waxaan qabaa in Macalinka MCC lala xisaabtamo, oo wiilasha yar yar yac laga dhaho.
Hadii maalin dhoweyd kii xulka Qaranka Soomaaliya lagu eryay Aqlaaq daro iyo Cunsuriyad kan ayaa ka daran ee si fiican ha loo fiiriyo.
Waxaa igu maqaal ah in Gudoomiyaha MCC oo macalinka saaxiib dhow yihiin uu raali igu yahay ficilada uu sameynayo. Marnaba macallinku xaq uma laha inuu u gacan qaado cidna.
Beri dhowayd ayay ahayd markii uu xiriirku cayriyey macallinkii Xulka Qaranka Somalia oo kasoo jeedey dalka Marooko, kaasoo lagu arkay anshax xumo iyo dhaqan silloon.
Waxaa Diyaariyey: Cabdiqani Cali Dalmar
Previous articleDAAWO: Booliiska Indonesia oo sidii ”rooxaan” u lebbistey si ay dadku u raacaan amarro lasoo rogey
Next articleFaransiiska oo bilaabay inuu diido in aayadaha & axaadiista qaar laga akhriyo masaajidda dalkaasi (Arrin wer wer leh oo bilaabatay)